Nick Mangwana is not impressed by socila media influencers who were hired by ZanuPF to promote the party and encourage people to vote. A report by ZEC said that only 2000 people had registered to vote in 2021. Nick Mangwana was not happy with these results and posted on his twitter the following.
The most recognised individuals who have been pushing the ZanuPF agenda and encouraging people to vote are Prophet Passion Java, Mai TT & DJTowers. Below is the report posted by ZEC of only 2000 people registering to vote in 2021
Only 2 000 registered to vote: Zec
The ruling Zanu PF and opposition parties rolled out voter registration campaigns during the course of the year to register millions of first-time voters ahead of the 2023 harmonised elections.
But Zec commissioner Jasper Mangwana yesterday dropped a bombshell during a virtual rally for the youth that the commission had so far only registered 2 000 first-time voters.
The revelations by Mangwana came at a time when the country is headed for by-elections to fill 133 parliamentary and local government seats, which fell vacant following the recall of MDC Alliance representatives by a rival faction led by Douglas
Mnangagwa and his main challenger, Nelson Chamisa of the MDC Alliance have in the past few months been conducting whirlwind tours across the country drumming up support ahead of next year’s do-or-die polls, with both politicians banking on the youth vote which they touted as the game changer.